IXiaomi Mi MIX Alpha iya kuba nescreen esikrwada esikrwada | I-Androidsis
Kukho intetho malunga neeveki malunga neefowuni ezintsha zeXiaomi zokuwa oku. Ifemi sele iqinisekisile ukuba ukuphela kwenyanga bahambisa iifowuni zabo ezimbini ezintsha nge5G ngokusemthethweni. Nangona sinokulindela iindaba ezinomdla ezivela kumvelisi odumileyo. Inkampani iya kuzisa neMi MIX Alpha, Eya kuba yeyona fowuni yesikrini igobileyo kwintengiso.
Okwangoku kuncinci okwaziwayo malunga nale fowuni, kodwa umfanekiso wokuqala kuyo sele ufikile. Ndiyabulela kuyo sinokubona enye into yescreen esigobile sale Xiaomi Mi MIX Alpha. Ukongeza, ifowuni iya kuziswa ngo-Septemba 24. Kwiintsuku ezimbalwa siza kuyazi yonke into.
Ayisiyofowuni yokusonga, njengoko zenzekile zivela kwiXiaomi. Kodwa le Mi MIX Alpha iya kuba nescreen esigobile esiya kunika okuninzi ukuze sithethe ngaso. Isongiwe kangangokuba ifikelela nasemva komnxeba, njengoko ubona. Njengoko kubonisiwe kwi-Mate 30, Amaqhosha okuphakamisa okanye ukunciphisa ivolumu aya kuhanjiswa.
Umbono wefowuni yile ukunciphisa ubukho bamaqhosha. Ubuncinci bokubona ukuba inkulu kangakanani le screen igobileyo, kuya kuba nzima ukuba namaqhosha kwisixhobo. Kungumsebenzi onokuthi uvelise inzala, wenze ukuba ifowuni isebenze ngeetephu, njengokunyusa ivolumu.
Kwinqanaba lobugcisa, akukho zinkcukacha zaziwayo malunga nale Xiaomi Mi MIX Alpha. Akukhange kubekho kuvuza kule modeli ithile. Ke kuyakufuneka silinde kude kube ngama-24 ukuba sazi yonke into malunga nesi sixhobo sitsha kumenzi waseTshayina. Into ecacileyo kukuba kuzakuthethwa ngayo.
Siza kujonga ukuvuza okutsha okunokwenzeka kwesi sixhobo, ukuze ukuba ngaphezulu kuyaziwa malunga neXiaomi Mi MIX Alpha, siya kwabelana nawe. Ngayiphi na imeko, ukulinda ukudibana nayo kufutshane, ke ngoLwesibini siza kukuxelela yonke into malunga nesi sixhobo sinomdla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi MIX Alpha iya kuba nesona sikrini sigobileyo kwintengiso
Ii-Galaxy A70s ziya kuboniswa kule nyanga eIndiya